Nzọụkwụ nchekwa nke ọzọ: Patrick Savalle nkwekọrịta site na Café Weltschmerz (ihe nrịba nke ịghọ aghụghọ ule): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 Ka 2019	• 7 Comments
isi iyi: linkedin.nl
Café Weltschmerz na-ebipụta na N'ajụjụ ọnụ a, "onye ọkachamara" Eric van de Beek (n'ezie na uwe, na-ele anya nlekere anya ma na-egwu poker) na otu kpakpando ebubo na-ekwu banyere ya, Patrick Savalle. Ị nwere ike ịhụ nyochaa n'okpuru njikọ a. Ihe niile a na-atụle ebe a na saịtị ahụ ejiri ike ndị a (onye na-eme nke ahụ "ọkachamara" ma jiri ya mara ya). Tụkwasị na nke ahụ, a na-echepụta na Patrick Savalle anọwo na-agba ọsọ ruo ọtụtụ afọ, ọbụnakwa merie ihe nrite. N'ezie, echiche a ghaghị ibute na mgbe ị na-eme ya niile "nke ọma" na "nke ọma," ịchọrọ izu nzuzo na Netherlands nwere ike ọ ga - abụkwa na Martin Vrijland na-azọrọ na e wakpowo ya. ndị ọrụ obodo: ihe efu niile.
Dị ka "ọkachamara" ị nwere ike ịnweta ọrụ oge niile gị ma mee nnyocha nchịkọta. Ọbụna ị nwere ike ịnweta ego maka ya ma ọ bụ merie ya ụgwọ. Enweghị nsogbu. Na mgbakwunye na ọrụ gị zuru oke, ị nwekwara ike ide isiokwu dị oke egwu. Ị na-egwu ya dị ka nke ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ "ọkachamara na ngwanrọ" (ọ dịghịkwa ihe jikọrọ ya na AIVD, ụkwara). "Ọ bụ naanị n'ebe a ka onye nchịkwa isi nke na-arụ ọrụ maka ọrụ ahụ, ma anyị ndị oru nyocha nke ọma bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, ị pụkwara ịchọta anyị na Café Weltschmerz".
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịgba gị ume ka ị chee echiche banyere nkwekọrịta. Nke ahụ bụ echiche nke e kere. Ọ bụ ihe niile dị mma na-adọrọ mmasị na ma eleghị anya ọbụna a bit na-akpa ọchị. Otú ọ dị, ihe ọ bụ isi bụ maka na ị na-esite n'aka onye edemede nke na-ede akwụkwọ na-agbanyeghị aka ya ruo ọtụtụ afọ iji gosipụta mmejọ ahụ na Netherlands kama ilekwasị anya na 911 na ndị ọzọ 'na-esi n'ihe ndina m egosi' ". Ị ga-adị anya na netwọk nchekwa nke yasengarage.nl edu. Naanị ịbanye n'ime ya, nke mere na ị bụ n'ime.
Ee, ụmụ nwanyị na ndị nwe obodo, ọ ghaghị ịghọta nke ọma na ọrụ nzuzo na nnukwu nyocha data ha enwewo ike ịkọwapụta ihe niile gbasara na ịntanetị banyere nkwekọrịta. N'ezie, ọtụtụ n'ime ha akwalitela onwe ha (ya na ebe a na-edebanye aha ya na abụọ). Mgbe ahụ, jikọọ onye ọnụ na-ekwuchitere ya dị ka Patrick Savalle, onye nwere ike ịbịa ma kpochapụ nwa mara mma nke dị n'ihu igwefoto (nke ụda nri dị n'azụ ya) Café Weltschmerz ma nwee onye ọ bụla n'ime nchekwa gị. Ọ bụ otú ahụ ka ọ dị na United States na Alex Jones na Joe Rogan na nke ahụ bụ na Netherlands.
A ga - agwa gị ụdị aghụghọ ọ bụla, ma e wezụga ndị nke mgbasa ozi ndị ọzọ nọ na akpa uwe ma dị iche na nke omume Psychological (PsyOps) ebe ọtụtụ usoro akụkọ Hollywood jikọtara ọnụ. I nwere ike ikwere na flags ụgha, ma karịa ihe niile, a gaghị eduga gị n'ụzọ dị ukwuu n'ụzọ dị mfe. Okwu ahụ adịgboroja miri emi ya mere, ọ pụtaghị na akwụkwọ Patrick. Okwu ahụ bụ PsyOp, ma ọ bụ psy-op, na-abịa nanị otu ugboro, n'ihe metụtara Q-Anon, mana Patrick enweela ike ịgụ ya na saịtị ahụ na a ghaghị akpọ nke a dịka igbe igbe. Ọ gaghị ekwu na Patrick n'onwe ya na - eme ihe dị ka igbe igbe. (lee ma gụọ n'ihu n'okpuru vidiyo)
Ị ga-anụ Patrick Savalle kọwaa otú e si etinye ikpe ikpe maka ya Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta na-egwu egwuregwu ma na-agbanye iwu ọhụrụ. Onye na-edozi ya anaghị eme ya. Ọ bụrụ na ị na-ele Café Weltschmerz, ọ dị ka ọ dị mma karịa atụ anya ya. "N'ezie, e nwere usoro aghụghọ, ma anyị edepụtara ha ihe ndị a maka gị. Anyị, ndị ọkachamara, nọdụ n'elu maka gị. Ọ ga-adị mma. Ghaa na iko kọfị ọzọ ma nọdụ ala ma zuru ike. Ị nwere ike ịhapụ ọrụ anyị n'aka ụmụ okorobịa."N'akwụkwọ ọ bụla Martin Vrijland na-ebipụta, a ga-edozi netụzụ ọhụrụ ọ bụla. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Patrick ga-ebipụta ngwa ngwa banyere ihe dị omimi na ọrụ PsyOp (arụmụka uche). Ngwunye nchekwa maka isiokwu ọ bụla.
Karịsịa ihe niile ị chọrọ iji nweta echiche na ị nwere ike ikwu okwu n'efu na Netherlands ma ị nwere ike ịmụrụ ndị nkwekọrịta. A sị ka e kwuwe, a ga-enye gị ihe ngosi n'ihu ọha. Ị gaghị achọta ihe anyị bi na mba mara mma n'efu! Anyị agaghị ekwurịta banyere ikpe Anne Faber, anyị agaghị ekwu maka ihe àmà ndị a na ebe nrụọrụ weebụ, nke na-egosi otú Powned si emepụta ihe ngosi na ọnọdụ. Egosiri m gị otu, dịka ọmụmaatụ, Zaanse vloggersrel zuru oke n'okpuru nchịkwa kubie ume ma mee ihe niile. Anyị anaghị ekwu banyere ọtụtụ ndị ọzọ PsyOps. Ọ bụ ya mere ị ga-esi wepụ ya na saịtị a ma duzie ya n'ime otu n'ime ụgbụ nchekwa.
Ọ bụghị n'efu na Patrick a dị mma banyere Alex Jones na Joe Rogan. Ọ bụ ndị ụkọchukwu ndị a na-agbanye ike. Ntinye nchekwa dịka Patrick Savalle n'onwe ya. Na-agụ isiokwu a lelee ya ma lezie anya na ihe edere na ala nke edemede ahu, nke m ga-etinye ebe a maka ime ka odi mma.
Ụgha nke kachasị njọ bụ na-eme ka a na-atụgharị gị n'eziokwu, site na ike nke ike ga-eduzi gị n'ime ụgbụ nchekwa ha, na-enye gị echiche na ị na-ahụ site na usoro nile nke aghụghọ, ma naanị ihe ndị a na-agbanwe na ị gaghị ahụ: usoro nchekwa nchekwa.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: yasengarage.nl
Bụrụ onye otu ugbu a ma nata ya!
Onye nkenke arnold Karskens na onye iro ya 'Zwartboek NOS news': lee ihe a!
Tags: Alex, aghụghọ, Mmiri, kọfị, izu nkata, nkwekọrịta, N'ezie, de, Eric, agba, ụbụrụ ụbụrụ, Ajụjụ ọnụ, Joe, Jones, Patrick, ihe nakawa, Rogan, Savalle, van, website, Weltschmerz
9 May 2019 na 14: 38
Shit ey Martin M ga-anọgide na-eso gị n'agbanyeghị na anaghị m azaghachi mgbe niile .. Ana m arụ ọrụ na album / mixtape na ụdị isiokwu a, karịsịa nsogbu ahụ, mmeghachi omume m na-agbalị ikwu okwu n'asụsụ Bekee na Dutch.
Na-ewe ihe dịka ọnwa 3 ka ọkara n'etiti, ka m mara .. maka ugbu a ekele maka mgbalị gị!
9 May 2019 na 15: 23
Lee ka o si dị mma,
Mgbe ahụ ị nwere ike iburu egwu maka abụ m
O doro anya na ọ na-efu m 2 awa oge m dị oké ọnụ ahịa (n'ihi na m na-egwu obere obere, guitar na bass), mana m ka chọrọ ka ọ bụrụ abụ zuru ezu dịka akụkụ nke ime ihe ọzọ karịa ihe niile ahụ dee.
9 May 2019 na 20: 27
Njikọ dị na ala. Ọzọ nkwenye siri ike site na nloghachi na Media, na-enweghị ikpe, ọkàiwu ma ọ bụ ihe àmà siri ike nke ihe ọ bụla, na mmiri na-ezo, na-adịghị na-edebe.
Ị na - agụ Patrick Savalle, ee, ị gụrụ n'ihi na ị gụrụ na nyochaa na Weltschmertz 1 / 3 nke ihe dị na ihuenyo gị na i wepụrụ na MartinVrijland, mana ọzọ ihe ọzọ ebe a.
Eleghi anya ihe maka Partrick Savalle chọpụta, ee, gịnị mere ndị ọkachamara na Weltschmertz anaghị ajụ MartinVrijland onye dere 7 maka afọ, anyị ahụtụbeghị 1 analysis nke Patrick ka MartinVrijland mere, bịa Patrick Savalle ọrụ ya
10 May 2019 na 18: 20
N'ezie omume ọma sitere n'aka 'weltschmerrz' ndị ọrụ
nke ọchịchị anyị, ma ọ dịkarịa ala, achọrọ m ikpochapụ. Chọta nzụlite ha ma na-ejikarị ụdị ndeji ụwa na ha na-ejide onwe ha dị ka ụmụ nwoke na-ede akwụkwọ.
Anụrụ m Patrick Savalle, ọ ga - abụ na o metụtara nwaazụ ụmụaka Saville na England? Ọ gaghị eju m anya, ọ fọrọ nke nta ka ha mara ibe ha, mgbe mgbe, otu ebe a maara nke ọma. Patrick ga-ekwupụta na ọ nwere 'French' ndabere dị ka ndị bi na Germany na-akpọ onwe ha 'German'.
13 May 2019 na 08: 54
Hey martin, echekwala m ibe gị. Ga-enye ya ebe.
Ụnyaahụ anyị mere songs 2 ma mechaa ha maka otu ụbọchị na ọkara, ụfọdụ ga-aga ngwa ngwa kama ha ga-agbalị imecha ngwa ngwa o kwere mee.
Ọ bụ n'ezie onye na-amu amu ka ọnwa 3 nwere ihe karịrị ya .. ka ọ dị ugbu a ọ na-aga nke ọma ma na-enwe 7 nọmba 6 ka ọ gaa, ga-ahụ ma enwere m ike idebe ụfọdụ online n'egbughị oge.
13 May 2019 na 13: 01
O doro anya na i kwesịghị ime ihe ọ bụla na nke ahụ, m ga-eme nke a n'onwe m
13 May 2019 na 14: 15
Ga-adịcha mma agaghị eji ya.
" Martin Vrijland ọ na-achịkwa mmegide? Mba: Gụọ ebe a ọ bụghị ya!
Mgbe Thijs H., ụgwọ Edith Schipper maka njide anya, jụrụ na ọchịchị gara aga, onye ọ bụla ga-anabata ya »
Nleta nile: 12.337.166